ခေါကျဆှဲကို | JAPAN DISCOVERY
မူလနရော » ခေါကျဆှဲကို
Updated: 2016-04-25 17:14
ခုမမိုတို လားမဲန်း ခေါက် ဆွဲ
ကောင်း မွန် လှ တဲ့ ၀က် ရိုး စွပ် ပြုတ် နဲ့ ကို စီ အများ အပြား ပါ ၀င် တဲ့ ခေါက် ဆွဲ အတုတ် ကို မှ ကြက်သွန် ဖြူ အပြား နဲ့ ဆီချက် တို့ ကို ပေါင်း စပ် ထား တဲ့ တကယ့် အကောင်း စား ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ခူးရူး...
Updated: 2016-01-08 09:40
ちゃんぽん・皿うどん ချန်း ပွန် ၊ စာရ ဥဒွန်း
【ちゃんぽんချန်း ပွန် 】 တရတ် ပြည်က နေပြီးလာ တဲ့ ကျောင်း သား တစ် ယောက် က ဗိုက် ဆာ နေတာ ကို မြင် ပြီး တော့ ဗိုက် ပြည့်ေ အာင် ကျွေး ချင် တယ် ဆို ပြီး ရှီကိုင် ရော် ရဲ့ သခင် ကြီး ချင်ပေဂျွန် က စဉ်း စား လို...
Updated: 2015-12-18 17:25
ဟကတတွန်းကိုဆုခေါက်ဆွဲဟာ ဒေသခံတွေရဲ့နာမည်ကြီးအစားအစာတစ်ခုပါ။ ၀က်ရိုးမှထွက်သော အရည်ကိုအခြေခံပြီး ပြုလုပ်ထားသောခေါက်ဆွဲရည်အထဲသို့ ပါးလွှာသော ရားမင်းခေါက်ဆွဲများနှင့် တွဲဖက်ပြီးစားသောက်နိုင်ပါတယ်။ ခေါက်...
Updated: 2015-12-16 10:00
鹿児島ラーメン ခဂေါရှိ မ လမဲန်းခေါက် ဆွဲ
span>ကျူရှူးရဲ့ လမဲန်း ခေါက် ဆွဲ လို့ပြောရင် အဖြူရောင် နဲ့ အရည် ပြစ်ပြစ် ၀က် စွပ်ပြုတ် လမဲန်း ခေါက် ဆွဲ ဆိုပြီး ထင် ကြပါလိမ့် မယ် ။ ဘာလို့လဲ ဆို တော့ ကျူရှူး ရဲ့ ခရိုင် တစ် ခု တစ် ခုချင်း စီ ရဲ့ လ...
ဘက်ပုခေါက်ဆွဲအေးဟာရှေးခေတ်အချိန်ကတည်းကဘက်ပုတွင်နာမည်ကြီးသောအစားအစာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ၁၉၅၀တွင် တရုတ်ပြည်မြောက်ပိုင်းမှ စာဖိုမှူးတစ်ဦးကဘက်ပုသို့လာရောက်စဉ် ဂျပန်စတိုင်ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ခေါက်...